Wulfenite, kubva kuMadagascar / lead molybdate mineral PbMoO4 / Video
Wulfenite, kubva kuMadagascar
Wulfenite inotungamirira molybdate mineral neyo PbMoO4. Inogona kuva inowanikwa kakawanda seyakatetepa tabular makristori nemuchena we-orange-mutsvuku kumucheka-ruvara-ruvara rwemaruva, dzimwe nguva maronda, kunyange zvazvo ruvara rungave rwakasiyana zvikuru. Muchidimbu chechivara dzimwe nguva inonzi "yellow lead ore".
Inopenya muetetalal system, kazhinji inowanzoita seyechidimbu, pyramidal kana mavara emakristasi. Izvo zvinoitikawo semasvingo epasi, granular. Inowanikwa munzvimbo dzakawanda, inosanganiswa nemitambo inotungamirira sechipiri mineral inobatanidza nenzvimbo yakasanganiswa yefambisi yemitemo. Ichowo chikamu chechipiri che molybdenum, uye chinotsvakwa nevatori.
Wulfenite yakatanga kutsanangurwa muna 1845 nokuda kwechiitiko muBad Bleiberg, Carinthia, Austria. Yakatumidzwa zita rinonzi Franz Xavier von Wulfen (1728-1805), muAustria mineralogist.
Inowanzoita sechidimbu chechipiri mumigodhi inokonzerwa nemhepo inokonzera mvura. Izvo zvinoitika ne cerussite, anglesite, smithsonite, hemimorphite, vanadinite, pyromorphite, mimetite, descloizite, plattnerite uye zvakasiyana-siyana zvesimbi uye manganese oksidi.
Nzvimbo yakatarwa ye wulfenite ndiyo Red Cloud Mine muArizona. Mvere dzemvura dzakadzika dzakatsvuka uye dzinowanzogadzirwa zvakanaka. ILos Lamentos nzvimbo yeMexico yakabudisa mazhenje emakristoni.
Imwe nzvimbo ndeyeGomo Peca muSlovenia. Iko kristasi yakatsvuka, kazhinji ine piramidi dzakagadzirwa zvakanaka uye bipyramid. Muchi1997, kristall yakaratidzwa padampamende nePost of Slovenia.
Nzvimbo dzishomanana dzinozivikanwa dzeWulfenite dzinosanganisira: Sherman Tunnel, St. Peter's Dome, Tincup-Tomichi-Moncarch migodhi yemigodhi, Pride America uye mine uye Bandora muColorado.
Makristani maduku anoitikawo muBulwell uye Kirkby muAshfield, England. Aya makristasi anoitika mu galena-wulfenite-uranifereous asphaltite kumusoro kwemakestone yemagesiya. Iyo wulfenite inowanikwa munharaunda iyi inofanana neyezvinhu (paragenetic sequence, pasi pesirivha uye antimony zviri mukati me galenas uye kusina kwe pyromorphite) kune wulfenites yeAlps uye inogona kunge yakafanana.
tenga mabwe echizvaro mudura redu